Umthetho Ozayo Wokushintsha Kwesimo Sezulu uthembisa ushintsho olulungile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umthetho Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu kumele ulingane ukuze wonke amazwe akwazi ukufaka inhlamvu yawo yesihlabathi futhi anciphise nemiphumela yawo. Ngale njongo, umthetho wakusasa ozokwakhiwa ngokushintsha kwesimo sezulu izohlinzeka ngoguquko olulungile kuyo yonke imikhakha.
Kuyini lokhu «ushintsho nje"?
1 Umthetho Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu Esizayo
2 Izihloko ezihlanganiswe emthethweni
3 Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu
Umthetho Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu Esizayo
Ukuguqulwa kwamandla kususelwa ekwehlisweni kwamandla okubasa njengamafutha, amalahle kanye negesi yemvelo kanye nokwanda kwamandla avuselelekayo. Lokhu kwenzelwa ukufeza umnotho wesikhathi esizayo osuselwe ekuhlukanisweni ngamakhaza. Kodwa-ke, izwe ngalinye, kuya ngesimo salo sezomnotho, lingakwazi ukuyeka ukukhipha amagesi abamba ukushisa bese litshala amandla ahlanzekile noma cha. Okwakho, umthetho wesikhathi esizayo wokuguquguquka kwesimo sezulu, Kumele icabangele ukuguqulwa kwamandla okulungile kuwo wonke lawo mazwe angakwazi ukukhokhela imodeli yentuthuko ephansi, njengoba kungaba njalo kubo bonke labo abasekela umnotho wabo ekusetshenzisweni kwamalahle.
Uma izwe umnotho walo usekelwe ukuxhashazwa kwezinto zokubasa ezimbiwa phansi, Ngeke kudingeke ukuthi kuncishiswe ukungcola, ngoba kungathinta izwe lonke ngendlela ebabazekayo futhi engagwemeki. Ngakho-ke, kuzokwenziwa umzamo wokuthi ikhomishini yomnyango kaNgqongqoshe esebenza kulo mthetho, ezolawula ukuhambisana kweSpain neSivumelwano SaseParis, ukukhomba zonke izingqinamba ezizobhekwana nomthetho wesikhathi esizayo kanye nokwakhiwa kwenguquko efanele bonke abantu.
Izihloko ezihlanganiswe emthethweni
Ukulungiswa nokuklanywa komthetho, izingqinamba ezifana nezinhloso ezintsha zesikhashana esifushane nezesikhathi eside zemikhakha sezixazululiwe. Okwakho, kuhloselwe ukuhlinzeka ngezimali ukuze yonke into ephakanyiswa emthethweni yenziwe, kanye nezinyathelo zokunxephezela kulawo mazwe anemikhakha esengozini enkulu yokuhlukaniswa ngamakholoni.
Zonke lezi zinto okuhloswe ukuthi zilungiswe zizovela ohlakeni lokuqala lomthetho, okulindeleke ukuthi luvele ngekota yokuqala yonyaka wezi-2018, selokhu kuqala uHulumeni kumele abonisane nawo wonke amaqembu ezepolitiki kanye nabanye abadlali bezenhlalo abathintekayo ukufinyelela esivumelwaneni.
Ngokucaciswa kwalo mthetho, iziphetho ezitholwe ngenkathi kwenziwa i- Ingqungquthela Yesimo Sezulu seBonn (COP23) lapho kuhlanganiswe khona ukuthi alikho izwe elihlehle emuva Esivumelwaneni saseParis, ngemuva kokuthi i-United States ihambile.
Okuphuthuma ngempela ukuthi wenze njani ngokushesha okukhulu lapho ubhekene nemiphumela ekhula njalo futhi enamandla yokuguquka kwesimo sezulu. Ngemuva kweCOP23 kube nentuthuko eminingi emithethweni okumele yenziwe ukuze iSivumelwano SaseParis sisebenze futhi okumele siphothulwe ekupheleni konyaka wezi-2018. Kusenomsebenzi omningi osalindile uma kuzotholakala ushintsho olulungile. Osomaqhinga bezulu kuzofanele babambe eminye imihlangano ngaphambi kwengqungquthela elandelayo ukuthola imininingwane ngala maphuzu.
Njengoba izehlakalo ezenzeka eplanethi zihlobene nokuguquka kwesimo sezulu zingaqondakala kuphela ngomthelela wesenzo somuntu, isixazululo kufanele sitholakale ngokushesha okukhulu.
Umbiko okhethekile wethimba lochwepheshe abasebenzela uhulumeni ngokuguquka kwesimo sezulu (IPCC) ngemithelela yokuguquka kwesimo sezulu ku umhlaba uphakeme ngama-degree angu-1,5, ezokwethulwa ngoSepthemba 2018, isihambile kahle futhi uye waba nokuphawula okungokwesayensi okungu-12.000 XNUMX. Ngaphezu kwalokho, kungaphezu kuka-2.000 124 ochwepheshe bokuguquguquka kwesimo sezulu abavela emazweni ayi-XNUMX abasebenza.
Kunzima impela ukufeza inhloso yeSivumelwano SaseParis sokungafinyeleli ekukhuleni kwamazinga okushisa aphakathi kuka-1,5 degrees Celsius. Kodwa-ke, kuyinjongo okumele ibhekwe futhi lokho kufanele kube yisisekelo sayo yonke imigomo yokuguqulwa kwesimo sezulu eyenziwayo kusukela manje kuqhubeke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umthetho Ozayo Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu uthembisa ushintsho olulungile